About Us - Jiangsu KingRay hwoupenyu Material Co., Ltd
Jiangsu KingRay hwoupenyu Material Co., Ltd. ari nyanzvi akaigadzira PTFE / Teflon musono akakonzera kubatana kwe mabhandi, Teflon Laminator Release Fabric / Teflon Washington City Offices rejira, Teflon Washington City Offices namira rejira, Teflon Washington City Offices yepasi bhandi, Teflon muchoto linner, Teflon microwave Dryer bhandi, Teflon kupisa chisimbiso bhandi, Teflon Separater Release Belt, silicone rabha jira. With yemhando midziyo uye michina.
Tabuda ISO9001 uye Germany DQS authentication mudzimai chete kutengeserana. Kubvira pakagadzwa, takapiwa vanobatisisa zvebhizimisi mweya "Specialization, Technicalization, Scale, People First, uye Innovation."
We makasimbisa-refu ukama nevamwe akakurumbira zvemaziso vagadziri vari pamba uye kunze, akadai Veit GmbH, Hashima, Oshima, Summit, uye KDK makambani. zvigadzirwa yedu zvinonzi nevakawanda aivigirwa kunyika dzinopfuura 20 uye munzvimbo, uye akahwina vatengi 'chivimbo uye rumbidzo.
Tine chokwadi chokuti yedu yepamusoro zvinhu uye mabasa kwazvo kuchaita kukwezva zvakawanda vatengi 'kuonga. isu Kubata ndiro danho rokutanga kuti avake bhizimisi raibudirira ukama nesu. Kana uchifarira chero zvinhu zvedu, tapota inzwa wakasununguka kushanyira Website redu kana taura nesu zvakananga kuti mamwe mashoko. Tinotarisira chokushandira nemi mune ramangwana.